Kulan looga hadlayay waxqabadka wasaaradda Maaliyadda oo Muqdisho lagu qabtay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Kulan looga hadlayay waxqabadka wasaaradda Maaliyadda oo Muqdisho lagu qabtay
Kulan looga hadlayay waxqabadka wasaaradda Maaliyadda oo Muqdisho lagu qabtay
Muqdisho (SNTV)-Kulankaan waxaa diirada lagu saaray howlqabadka wasaaradda waxaa uu ka jawaabayay sadax su’aalood oo kala ahaa xagee ka nimid? xageen joognaa? Xageense u soconaa? Marka laga hadlayo shaqada wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya.
Howladeena wasaaradda madax iyo shaqaalaba waxa ay ka wada hadlayeen guulihii la gaaray iyo caqabadaha jira sida looga gudbi karo waxaana ka qeyb galay wasiirada maaliyada, Ganacsiga, Qorsheynta Dowladda Soomaaliya, masuuliyiin, saraakiil ciidan, shaqaalaha wasaaradda maaliyada iyo merti sharaf kale,
Wasaaradda maaliyada waxa ay soo bandhigtay horumarka daqliga gudaha dalka oo ee lixdii sano ee la soo dhaafay oo is barbar dhig lagu sameeyay iyo waxa iska badalay.
Tusaale ahaan sanadkii 2018 daqliga dalka ayaa kordhay 31% una dhigatay miisaaniyadda guud ee qaranka ee sanadkii tagay in 45% ay ka timid canshuuraha gudaha lacagihii laga uruuriyay.
Agaasimaha guud ee wasaaradda Maaliyadda Suleemaan sheikh Maxaamed Cumar ayaa howlwadeenada wasaaradda ugu mahad celiyay dadaalka ay ku bixinayaan horumarinta howlaha wasaaradda oo ay dalkooda ugu adeegayeen.
Agaasimaha guud ee Daqliga wasaaradda Maaaliyadda Jacfar Maxamed Axmed ayaa sheegay aragti daqli kordhintu saldhig u tahay dhismaha dalka iyo hagaajinka maamulka maaliyadda.
Taliyaha Hogaanka Canshuuraha ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Gen Cabdulaahi xasan Bariise ayaa tilmaamay inuu wax badan iska badalay dhibkii ay ku qabeen canshuur bixiyayaasha oo hada ay dadka canshuuraha u bixiyaan sidii la rabay iyaga oo imaanaya goobaha looga talagalay.
Xisaabiyaha guud ee Qaranka Faadumo Cismaan faarax oo ka mid aheed masuuliyiintii ka qeyb gashay kulanka ayaa sheegtay in sanadihii la soo dhaafay xafiiska xisaabiyuhu sameeyay horumar la taaban karo oo la xiriira hubinta habka maareynta dhaqaalaha.
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha DFS Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ku amaanay dadaalka ay galinayso horumarinta dhaqaalaha ayna sii xoojinayaan la shaqeynta wasaaradda.
Wasiirka Maaliyadda XFS Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa bulshada Soomaaliyeed uga mahad celiyay garab istaaga wasaaradda maaliyadda, waxaana uu sheegay in wasaaradu sameysay horumar la taaban karo oo loo qaaday kordhinta daqliga, deyn cafinta iyo bixinta mushaaraadka.
Previous articleKulan looga hadlayey siddii loo xoojin lahaa howlaha baarlamaanka Federaalka oo Muqdisho ka dhacay
Next articleShir u dhaxeeyay Hay’adaha u xilsaaran dib-u-eegista Dastuurka iyo Beesha Caalamka oo Muqdisho ka dhacay